Telecom |Hal qayb oo ka mid ah Mamo Power Technology Co., Ltd.
Mamo POWER Diesel Generator Dess for TELECOM PROJECT
Qalabka Korontada Naaftada Korantada ee joogtada ah ee joogtada ah ayaa si weyn looga isticmaalaa warshadaha Isgaarsiinta.
Sida Shirkad caalami ah, MAMO Power waxay diiradda saartaa naqshadaynta, soo saarista iyo habaynta nidaamyada tamarta tamarta iyo xalalka tamarta sare ee tamarta.Taageerada khabiirka ah ee iibiyaha maxalliga ah, MAMO Power waa bixiyayaasha summada adduunka oo dhan waxay u soo jeesteen sahay koronto oo la aamini karo oo la isku halayn karo.
Khibrada iskaashiga ee mashruucyo badan oo Isgaarsiineed, MAMO Power waxay si dheeraad ah u fiirisaa adkeynta iyo badbaadada shaqada gen-sets.
Nidaamka xakamaynta caqliga ee MAMO Power wuxuu bixiyaa madal isgaarsiineed oo fog, oo leh tignoolajiyada gaarka ah ee patent-ka u oggolow macaamiisha inay la socdaan oo ay ku xakameeyaan dab-dhaliyaha naaftada qalab kale oo ka socda xafiiska ama meel kasta oo kale.
Mamo Power Diesel Generator-ka ugu caqliga badan iyo xirmooyinka kontoroolka fog fog ayaa hadda leh abka taleefanada casriga ah ee bixiya marin u helka halbeegyada koronto dhaliyaha oo abuura ogeysiis kasta oo ku saabsan goobta.Aqoonta hore ee arrintu waxay awood kuu siinaysaa inaad u wakiisho kheyraadka ku habboon, si aad u badbaadiso booqashooyinka khasaaray, waqti iyo inaad hesho faa'iido badan.Tani waxay sidoo kale ku shaqayn kartaa ganacsiga kiraynta ee qalabka dhaliya naaftada.